Xog: Cayaar siyaasadeedka cusub ee dib u dhigeysa doorashada Soomaaliya | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Xog: Cayaar siyaasadeedka cusub ee dib u dhigeysa doorashada Soomaaliya
Xog: Cayaar siyaasadeedka cusub ee dib u dhigeysa doorashada Soomaaliya
Doorashada Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacday kadib markii uu fuli waayey jadwalkii cusbaa ee doorashada ee dhigayey in doorashada xildhibaanada Aqalka Sare ay billaabato 25-ka July, oo ku beegneyd Axaddii.
Hase yeeshee, sida ay ogaatay banaadirsom Online, qabashada doorashada ayaa markan wajaheysa caqabad cusub, oo ah cayaar siyaasadeed u dhaxeysa beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, taasi oo salka ku haysaa lacagta ku baxeysa doorashada.
Sida ay banaadirsom Online xogta ku heshay, beesha caalamka ayaa diiday inay bixiso lacagta ku baxeysa doorashada oo gaareysa illaa 40 milyan oo dollar, ayada oo ku xirtay shuruud ah, in marka hore lasoo geba-gebeeyo doorashada Aqalka Sare.
Si kastaba, banaadirsom Online ayaa rumeysan, in Axmed Madoobe weli uu qabo walaac la xiriira arrintaas, islamarkaana haddii waqtigaas la gaaro isaga oo aan doorasho qaban ay muran cusub gelin karto awoodda uu ku qabanayo doorashada.
Previous articleRonaldinho Oo Lionel Messi U Diray Fariin Ku Saabsan Mustaqbalkiisa – banaadirsom
Next articleGuddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa markii u horeysay soo jeediyay arrin xasaasi ah oo la xiriirta lacagaha ay hesho Al-Shabaab iyo howlaha sugida Amniga ee ka socda deegaanadaas. Cabdiladiif oo hadda booqasho ku jooga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxa uu soo jeediyay inaysan marnaba Ganacsatadu siin argagixisada lacago baad ah oo ay isku bad-baadinayaan, halka lacagahooda lagu gumaadayo shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu xusay in lacagaha ay ganacsatadu siiyan Al-Shabaab iyo Daacish ay sii dhiiri-geliso falalka arxan darada ah ee lagu laynayo shacabka, islamarkaana ay ganacsatadu qeyb ka tahay falalkaas, maadama ay lacagta u badan baxshaan, sida uu hadalka u dhigay. “Al-Shabaab laba meel ayay lacag badan ka helaan waa Ganacsatada Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho iyo kuwa Magaalada Boosaaso, waa in Ganacsatada ay si deg-deg ah u diidaan lacagtaas oo ay u fariistan, una midoobaan arrintaas,” ayuu yiri Guddoomiye Cabdiladiif. Ad by Valueimpression Sidoo kale waxa uu soo jeediyay in la toogto ganacsade kasta oo la ogaado in uu lacag siiyo argagixisada, ama’se la maxkamadeeyo, si looga waantoobo arrintaas oo dhibaato weyn ku ah dalkeena. “Waa in la marsiiyo dariiqa argagixisada ay dadka marsiiyan, waxaan jeclaan lahaa in cidii lagu ogaado in dariiqa ku toogataan, haddii ganacsato weyn lagu ogaado lacag waa in la toogta ama maxkamadeysaan.” by TaboolaYou May Like Dhageyso: Xog cusub oo laga helay arrinta Ikraan Tahliil iyo ‘waxa ay sababsatay’ – Caasimada Online Xuutiyiinta oo ka hadlay dilkii ay u gaysteen Soomaalida WIIL dhallinyaro ah oo ay dishay XAASKIISA oo u dhashay sagaal carruur ahWIIL dhallinyaro ah oo ay dishay XAASKIISA oo u dhashay sagaal carruur ah Ugu dambeyntiina waxa uu ku booriyey shacabka in loo midoobo la dagaalanka argagixisada, islamarkaana ay gaancsatada ka waantowdo lacagaha ay siinayaan kooxahaaas, midaasi oo lagu leynayo dadkooda.